Aflatoxin M1 Test Fluorescence-aflatoxine - BALLYA
Aflatoxin M1 fitsapana fluorescence
Comming sooon! Fitsapana Quantitative 20ppt - 80ppt
Ho an'ny ronono, Milk Powder, Ronono namboarina
Fampianarana ho an'ny fitsapana Aflatoxin M1
Kitapo fanandramana tokana, haingana hamantatra residu antibiotika amin'ny ronono sy vokatra vita amin'ny ronono amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia immunochromatography fluorescent. Raha vao 7-10 minitra ny valiny.
Ho an'ny ronono manta, vovo-dronono, ronono vita amin'ny pasitera.
Aza mifanohitra amin'ny macrolides, trimethoprim, fanafody sulfonamides, sns.
2. Fepetran'ny famantarana
Jereo ny fampianarana.
Fitehirizana sy fiainana talantalana
Amin'ny 2 ~ 8 ℃ ivelan'ny tara-masoandro, 12 volana
Compolents (96T / boaty)
Torohevitra ho an'ny mini pipette
1. Makà santionan-dronono 200 μL, arotsaka ao anaty lavadrano mikraoba, afangaro 10 heny amin'ny agents mavokely.
Fanamarihana: fadio ny residimenan'ny santionany ao anaty fantsakana.
2. Atsofohy mandritra ny 3 minitra
3. Atsofohy ao anaty lava-drano ny tady
4. Atsofohy mandritra ny 5 minitra
5. Mialà kofehy ary vakio amin'ny maso na mpamaky ny valiny.
1. Raha hita ny tsipika C dia hadika araka ny torolalana. Mampitaha ny tsipika T amin'ny tsipika C handikana ny tsara na ny ratsy.
2. Raha tsy hita i C & T dia tsy mety ny mamantatra azy, avereno avereno andrana indray.
Jereo ny torolalana
Raha te-hahalala bebe kokoa ianao, dia mifandraisa aminay
Fanontaniana Trivia: Inona ny aflatoxin m1?
Aflatoksin (AFT) dia tofoid bisfuran novokarin'ny karazana sasany toy ny Aspergillus flavus ary Aspergillus parasalty. Ny Aflatoxine sy ireo bakteria mamokatra azy dia hita betsaka amin'ny tany, biby ary zavamaniry ary voanjo isan-karazany. Ny karazan-tsofina sasany dia mamokatra karazana aflatoxin mihoatra ny iray, ary misy ihany koa ny karazana izay tsy mamokatra karazana aflatoxin amin'ny aflatoxin. Ny aflatoxin dia mazàna mandoto voa, menaka ary vokatra hafa toy ny voanjo, katsaka, vary, soja ary varimbazaha. Ny sakafo isan-karazany amin'ny zavamaniry sy biby dia azo lotoina ihany koa. Rehefa avy mihinana sakafo maloto ny aflatoxine ny biby, dia misy poizina marobe azo jerena ao aty, voa, hozatra, ra, ronono ary atody. Izy io dia karazana mycotoxins izay manapoizina indrindra ary manimba indrindra ny fahasalaman'ny olombelona.
Aflatoksin B1 dia aflatoxin novokarin'i Aspergillus flavus sy Aspergillus parasalty. Izy io dia karsinogenina matanjaka tokoa, ary ny poizina mahatsiravina dia 10 heny noho ny potassium cyanide ary 68 heny noho ny arsenic. Ny poizina miteraka aretina dia miteraka homamiadana. Ny azobenzene fototra dia avo 900 heny. Ny aflatoxin B1 dia hita indrindra amin'ny sakafo voaloto, ary ny atiny avo indrindra dia amin'ny sakafo voatahiry ao anaty tontolo iainana maripana sy avo. Ny aty no taova mora tohina indrindra amin'ny fanapoizinana aflatoxin B1.
Aflatoksin M1 dia miorina tsara amin'ny fananana fizika ary tsy ho simban'ny pasteurisation. Aorian'ny fihinanana sakafo na sakafo voaloton'ny aflatoxin B1 avy amin'ny biby mampinono, dia navadika ho aflatoxin M1 tamin'ny alàlan'ny hydroxylation. Azo alaina amin'ny ronono na ronono. Ny karsinogeninina an'i Aflatoxin M1 amin'ny karazany mora tohina dia manodidina ny filaharana midadasika kokoa noho ny aflatoxin B1. Ny lozisialy Aflatoxin M1 dia miseho indrindra amin'ny fahasalaman'ny homamiadana sy ny fiovan'ny toetr'andro ary misy vokany manimba amin'ny sela atin'ny olombelona sy ny biby, izay mety hitarika homamiadan'ny atiny ary na dia ny fahafatesana aza. Aflatoxin M1 amin'ny ankapobeny dia heverina ho toy ny vokatra azo avy amin'ny aflatoxin B1.
Aiza no ahitantsika aflatoxin?
Aflatoxine amin'ny voanjo
Rehefa mamontsina sy mavo ny vary voanjo, dia hamokatra aflatoxine, ary tsy tokony hohanina raha maimbo. Ny voanjo dia iray amin'ireo vokatra mora tohina Aspergillus flavus. Aflatoxin dia manana fifandraisana akaiky be amin'ny voanjo.
Ny aretin'ny Aspergillus flavus sy ny famokarana aflatoxin dia miseho tsy mandritra ny fambolena voanjo fotsiny, fa mandritra ny fanodinana ihany koa. Ny aflatoxins dia ekena ho carcinogens matanjaka indrindra ary azo apetraka ao amin'ny atiny ary mitaona homamiadan'ny aty.
Aflatoxine amin'ny katsaka
Ny bobongolo katsaka dia ho voaloto amin'ny aflatoxin, metabolitin'ny bobongolo, izay manana fitoniana matanjaka sy ara-batana matanjaka. Sarotra ny manafoana ny fahasimban'ny aflatoxin amin'ny biby fiompy sy ny akoho amam-borona ary ny olombelona amin'ny alàlan'ny fanodinana sy fahandroana tsotra. Ny olombelona sy ny biby dia mihinana katsaka maivam-bolo fatra ambany, ary ny aflatoxin dia hapetraka ao amin'ny vatana, indrindra ho an'ny biby fiompy sy ny akoho amam-borona, ny aflatoxin dia hanan-karena amin'ny tavy hozon'ny biby fiompy sy ny akoho amam-borona, ary hanimba ny fahasalaman'ny olombelona amin'ny alàlan'ny rojom-bary. .
Aflatoxine amin'ny dibera voanjo
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny voanjo dia iray amin'ireo famokarana aflatoxin be mpitia indrindra. Ny dibera voanjo vita amin'ny voanjo dia mety misy aflatoxine marobe ihany koa. Aflatoxin dia azo amboarina amin'ny dingana maro amin'ny famokarana dibera voanjo. Ny fomba lehibe hialana amin'izany dia ny tsy fanandramana dibera voanjo efa lany daty na novokarina tamina atrikasa kely. Amin'ny ankapobeny, raha toa ka mahafeno fitsipiky ny firenena ny atiny aflatoxin, dia tsy mampaninona ny vatan'olombelona amin'ny ankapobeny, ary tsy tokony taitaitra ny rehetra.
Aflatoxin m1 amin'ny ronono
Misy antony telo eo ho eo.
Ny iray dia ny fihinan'ny omby masiaka fahana, izay miteraka olana amin'ny ronono manta.
Ny iray hafa dia tsy nodiovina ilay masinina nandritra ny fizotry ny famokarana ary niseho ny bobongolo biolojika.
Aorian'ny fivoahan'ny rivotra dia atambatra amin'ny akora biolojika ao anaty rivotra izy io, izay mety hamokatra aflatoxin.
Na dia mahandro ronono aza ny mpanjifa tsotra dia tsy handray anjara amin'ny famongorana aflatoxins izany. Raha ny ronono dia mbola tsy misy fomba fihenan-tsasatra lehibe sy mahomby amin'ny indostria hatreto. Ny vahaolana lehibe indrindra dia ny fisorohana ny omby tsy hihinana sakafo misy poizina.
Aflatoxin m1 amin'ny fetra ronono
Ny lalàna Shinoa dia mamaritra fa ny fetra farany ambony amin'ny aflatoxin M1 sy M2 amin'ny vokatra ronono sy ronono dia 0.05 μg / kg.
Araka ny lalàna iraisam-pirenena, ny fetra farany ambony ho an'ny aflatoxin M1 amin'ny ronono ary ny vokatra vita amin'ny ronono dia 0 ka hatramin'ny 1.0 μg / kg.
Vokatra Aflatoxin m1
Ny loharanon'ny loharanon'ny olona aflatoxin dia ny sakafo voaloto. Misy karazan-tsakafo roa azo tsentsina: ny làlambe voalohany dia avy amin'ny sakafo zavamaniry voaloton'ny aflatoxin (B1 indrindra). Ny làlambe faharoa dia amin'ny alàlan'ny feed. Aflatoxins (amin'ny ankapobeny M1) amin'ny ronono na zavatra vita amin'ny ronono (ao anatin'izany ny fromazy, vovo-dronono, sns.)
Fagnapoizinana aflatoxin m1
Aflatoxin M1 dia tena mahavariana. Ny pathogenisity dia misy karazana poizina roa sy fahasamihafana roa. Mikasika ny poizina, ny AFB1 no aflatoxin misy poizina indrindra hita. Na dia aflatoxin M1 aza dia filaharam-pototra tsy dia misy poizina noho ny AFB1. Fa raha ampitahaina amin'ny arsenika dia in-40 izy, ary raha ampitahaina amin'ny sianide potasioma dia in-5 izy io, izay mbola misy poizina be ihany. Mikasika ny fihenan'ny homamiadana, ny aflatoxin M1 dia karsinogenia matanjaka, ary ny karsinogenisialy dia mitovy amin'ny an'ny AFB1. Ny maso iraisam-pirenena momba ny fikarohana ny homamiadana dia nanangana ny kôlôksininina aflatoxin M1 avy amina karinôzônia kilasy faharoa ho lasa karzinôniônina kilasy voalohany.
Ny soritr'aretina tany am-boalohany dia misy ny aretin-kibo, fivontosana, tsy fahitan-tory, fandoavana, feo tsinay hyperactive, tazo mandalo ary jaundice. Amin'ny tranga goavambe, ny hepatosplenomegaly, ny fanaintainan'ny aty, ny fandokoana mavo ny hoditra sy ny fonontsenan-tsiranoka, ny peritoneal effusion, ny edema amin'ny farany ambany, ny jaundice, ny hematuria, sns dia mitranga ao anatin'ny 2-3 herinandro. Fanitarana ny fo, edema pulmonary, mandeha lalan-dra gastrointestinal, koma ary na dia ny fahafatesana aza.
Kitapo fitsapana Aflatoxin m1
Kitapo fitsapana Aflatoxin M1 dia fomba mahomby koa hiatrehana ny aflatoxin M1 amin'ny ronono. Afaka mamantatra ny habetsahan'ny aflatoxine be loatra amin'ny ronono ara-potoana mba hisorohana ny olona tsy hihinana azy io amin'ny tsy nahy. Tsotra ny fandidiana, marina sy haingana ny valiny, ary tsy lafo ny fandaniana. Safidy tsara.
Ny Aflatoxin M1 dia misy amin'ny rononon'omby, izay matetika ateraky ny sakafom-pisotro omby voapoizin'ny aflatoksin B1 (AFB1). Aflatoxin M1 dia miorina amin'ny natiora. Fomba fanodinana ronono telo mahazatra— pasteurisation (LTLT, 63 ℃ mandritra ny 30 min), pasteurisation haingana be amin'ny maripana (HTST, 72 ℃ mandritra ny 15 s), ary sterilization maripana avo lenta (UHT, 135 1 2 ka 1 s) afaka tsy manimba ny firafiny, noho izany dia zava-dehibe indrindra ny fanaraha-maso ny atiny AFBXNUMX amin'ny famahanana sy ronono manta.
Ny fahitana aflatoxins amin'ny ronono dia fomba tsara ihany koa. Ballya manome kitapo fitsapana aflatoxin M1 ho an'ny aflatoxin M1 amin'ny ronono. Tsotra sy haingana, ny valin'ny fitsapana dia mifanaraka amin'ny fenitry ny EU. Tsy ny aflatoxin m1 ihany, i Ballya ihany koa no manome karazana mahazatra kitapo fitsapana antibiotika ronono.